LG G16 အတွက်အခင်းအကျင်း ၁၆ ခုကိုအခမဲ့ download လုပ်ပါ Androidsis
Francisco Ruiz | | Android application များ, LG, Android ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ
နောက်ဆောင်းပါးနှင့်လမ်းဖြင့် input ကိုငါသည်သင်တို့အားလုံးပြီးပြည့်စုံသောမျှဝေချင်တယ် LG G2 အတွက် theme pack.
စုစုပေါင်း 16 အခင်းအကျင်း apk format နဲ့, ရရှိ။ ပြုစုခြင်းနှင့် download လုပ်ရန် ZIP ဖိုင်တွဲတစ်ခုတွင်ချုံ့သည် နှင့်နိုင်ငံစုံမဆို terminal ကိုအတွက်လွယ်ကူသောတပ်ဆင် LGအဆိုပါ LG က G2 အားလုံး၎င်း၏မူကွဲနှင့်တည်ဆဲမော်ဒယ်များအတွက်။
ဒီပြီးပြီ LG G2 အတွက် theme pack၊ ၎င်းသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှကိုယ်ပိုင်စုဆောင်းမှု၏ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင် terminal တွင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးစမ်းသပ်ခံခဲ့ရပြီး၎င်းတို့သည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်အတည်ပြုသည်။ အကယ်၍ သင်ပိုမိုသောအရာတစ်ခုကိုလိုချင်လျှင်ဤနေရာတွင်မည်သို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရမည်ကိုပြပါလိမ့်မည် LG themes များ G6
အဆိုပါအကြား ကျွန်ုပ်တို့မီးမောင်းထိုးပြနိုင်သည့်အကြောင်းအရာများ လာမယ့် LG လာမည့်စမတ်ဖုန်းကိုအတုယူသည့်အရာကဲ့သို့သော themes များရှိသည် LG က G3, ၏ interface ကို simulating တစ်ဆောင်ပုဒ် Samsung ရဲ့ Galaxy S4၏အိုင်ကွန်များတုပသည့်အခြားဆောင်ပုဒ် Windows ကို 8 ဒါမှမဟုတ်မှုတ်သွင်းတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားဆောင်ပုဒ် Ubuntu ကို အဆိုပါ quintessential Linux ကို distro ။
ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည် ဒီ link ကိုမှ zip ဖိုင်ကို download လုပ်ပါတစ်ချိန်က download လုပ်ပြီးလျှင်၎င်းသည် unzip လုပ်ပြီးရရှိသော folder ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကော်ပီသို့ကူးယူပါ LG က G2:
အခုကနေ android အတွက်ဖိုင် browser ကျွန်ုပ်တို့ကူးယူပြီး execute လုပ်သောလမ်းကြောင်းသို့သွားသည် apk တစ်ခုချင်းစီကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ၎င်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခွင့်ပြုချက်များကိုခွင့်ပြုချက်ထားရမည် မသိသောမူလအစ သို့မဟုတ် Google Play စတိုးအပြင်ဘက်တွင်ရှိသည်။
တခါ အားလုံး apk installedသို့မဟုတ်၊ ၎င်းကိုပျက်ကွက်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ဝင်စားသောအကြောင်းအရာများ၏ apk သာလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ၏ချိန်ညှိချက်များသို့သွားပြီးရွေးစရာကိုရွေးချယ်ပါ။ မူလမြင်ကွင်း နှင့်အတွင်းပိုင်း themes များ:
ဤနေရာတွင်သင်ယခင်ရွေးချယ်ထားသည့်အခင်းအကျင်းများအားမည်သို့တပ်ဆင်ထားသည်ကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ သူတို့ကိုလျှောက်ထားရန် သင်လုပ်ရန်မှာကျွန်ုပ်တို့စိတ်ဝင်စားသောခေါင်းစဉ်ကိုနှိပ်ပြီးရွေးစရာကိုရွေးချယ်ပါ aplicar.
ဒေါင်းလုပ် - LG G16 အတွက်အခင်းအကျင်း ၁၆ ခုပါ ၀ င်သည်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » LG G2 အတွက်ဆောင်ပုဒ်အပြည့်အစုံကိုအခမဲ့ရယူပါ
roberto gutierrez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါဟေး၊ s4 မှ g3 သို့မဟုတ် gXNUMX မှတစ်ခုမလာ
roberto gutierrez အားပြန်ကြားပါ
အဆိုးဆုံးဆာဗာများထဲမှတစ်ခုကိုသင်တင်ပို့ပြီးပါပြီ။ သင်ရွေးချယ်လိုက်သောအရှက်ကွဲခြင်းကို Zippishare ကိုရွေးနိုင်သည်
Samuel Ed က ဟုသူကပြောသည်
ပို့စ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် တောင်းခံရန်မလွယ်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ download လုပ်ထားသောဖိုင်များကို MEGA သို့ upload လုပ်ပါ။ Uploaded သည်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းပါသည်။ ကြိုပြီးကျေးဇူးပါပဲ။
Samuel Ed သို့ပြန်ပြောပါ
လိမ်လည်မှု !!! ထိုဆာဗာမှဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်တစ်ရက်လုံးလုံးအချိန်ယူခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် LG G3 ပြissueနာမရှိ၊ အစ်ကို၊ သင်တစ် ဦး စာရေးရန်သွားလျှင်သင်တင်ပို့သည့်အရာကိုကောင်းစွာစစ်ဆေးပါ၊ ပို့စ်မှာအားလုံးကောင်းပေမည်။ ?
၂၀၁၃ ခုနှစ်ကူးယူထားသည့် paste သည်ပုံတစ်ပုံမျှတင်ခြင်းသည်မည်သည်ကိုပင်မသိပါ
Juan Pablo Martinez Bautista ဟုသူကပြောသည်
အလွန်ကောင်းသောပံ့ပိုးမှု၊ ၎င်းတွင်ရိုးရှင်းသောအကြောင်းအရာများရှိသော်လည်းသင်၏ဆဲလ်ဖုန်းကိုမတူကွဲပြားစေသဖြင့်သင်သည်နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုချန်ထားနိုင်ရန်၊ သင်သည်အရည်အသွေးများကိုတောင်းဆိုလိုပါက၎င်းတို့သည်လွတ်လပ်သောအကြောင်းအရာများဖြစ်သောကြောင့်တောင်းဆိုမှုများစွာမလိုအပ်ပါ။ မင်းပေးရမယ်
Juan Pablo Martinez Bautista အားပြန်လည်ဖြေကြားပါ
ငါနည်းလမ်းတစ်ခုကိုကူညီတစ်စုံတစ် ဦး ကို download လုပ်လို့မရပါဘူး
မင်္ဂလာပါ။ မေးခွန်းတစ်ခု။ ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်မှအသုံးချပရိုဂရမ်များစွာကိုဖျက်ပစ်သည်။ ၎င်းသည် LG G2 ဖြစ်သည်။ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏မေးလ်သို့အလုပ်များပို့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်ဖွင့်လိုက်သည်။ စာရွက်စာတမ်းများမရောက်ရှိနိုင်ပါ။ အကြောင်းမှာသူတို့သည်အလွန်ပြင်းထန်သောကြောင့်သူတို့သည်ငါ့ထံသို့မလာမီ ငါ application တခုကိုဖျက်လိုက်ပြီလို့ငါထင်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါအဲဒီအလုပ်တွေကိုရဖို့ငါဘာလုပ်လို့ရတော့မှာလဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုစာဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ Bluetooth မှသော်လည်းကောင်းမဆက်သွယ်နိုင်လို့ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ